လေ့လာမှုသည် CPUI-9 အား“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲခြင်း” သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစစ်ဆေးရန်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်ပျက်ပြယ်သည်
လေ့လာမှု "ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ" ဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းစွဲတစ်ခုခုအကဲဖြတ်ရန်တစ်ခုတူရိယာအဖြစ် CPUI-9 invalidates
အပိုင်း 1: နိဒါန်း
တစ်ဦးကလေ့လာမှုအသစ် (ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။, 2017) Joshua Grubbs မှတီထွင်ထားသည့်“ ရိပ်မိညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” မေးခွန်းလွှာဖြစ်သော CPUI-9 ကိုစမ်းသပ်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ပြီး၎င်းသည်“ အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ကိုတိကျစွာအကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် or "ရူပါရုံစွဲ" (ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory-9 ရမှတ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်အမှန်တကယ် compulsive စဉျးစားကွညျ့သလား? Abstinence ကြိုးပမ်းမှု၏အခန်းက္ပ Exploring)။ ထို့အပြင် CPUI-1 မေးခွန်း၏သုံးပုံတစ်ပုံသည်“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်း”၊ “ ဘာသာတရားဆိုင်ရာ” နှင့်“ ညစ်ညမ်းသောနာရီအသုံးပြုမှု” တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောခိုင်လုံသောရလဒ်များကိုပြန်ပို့ရန်ချန်လှပ်ထားသင့်သည်။ တွေ့ရှိချက်များသည် CPUI-3 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည့်သို့မဟုတ်၎င်းကိုအသုံးပြုသောလေ့လာမှုများအပေါ်မှီခိုခဲ့သည့်မည်သည့်လေ့လာမှုမှမဆိုကောက်ချက်အပေါ်သိသိသာသာသံသယများဖြစ်စေသည်။ လေ့လာမှုအသစ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ဝေဖန်မှုများသည်ဤကျယ်ပြန့်စွာဖော်ပြထားသောအရာများကိုထင်ဟပ်ဖော်ပြသည် YBOP ဝေဖန်မှု.
ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများအတွက် CPUI-9 လေ့လာမှုများနှင့်သူတို့မွေးထုတ်သည့်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အောက်ပါမေးခွန်းထုတ်စရာအခိုင်အမာဖို့လှူဒါန်းခဲ့:
CPUI-9 ၏“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲစွဲလမ်းမှုကိုယုံကြည်ခြင်း” သို့မဟုတ်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲစွဲလမ်းခြင်း” ကို“ အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲခြင်း” မှခွဲခြားနိုင်သည်။
"porn အသုံးပြုမှုလက်ရှိအဆင့်ဆင့်" ဖြစ်ပါတယ် အ တခိုင်လုံသော proxy ကို အမှန်တကယ် porn စွဲမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းစွဲအကဲဖြတ်မေးခွန်းအပေါ်ရမှတ်များ။
အချို့ဘာသာရပ်များတွင် "porn အသုံးပြုမှုလက်ရှိအဆင့်ဆင့်" လုပ်ခဲ့တယ် မဟုတ် စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်များနှင့်အတူ linearly ဆက်နွယ်နေကြောင်း။ ဂရော့ဘ်စ်ကဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်သူတို့အားစွဲလမ်းစေသည့်“ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ” ကိုမှားယွင်းစွာယုံကြည်သည်ဟုဆိုကြသည်
အဆိုပါ CPUI-9 လေ့လာမှုများမှာတော့ "ယာနျဘာသာတရားကို" နဲ့ဆက်နွယ်နေပါသည် စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်များ။ ထိုကြောင့် Grubbs သာကြောင်းအများဆုံးဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများကိုအကြံပြု ယုံကြည် သူတို့စွဲဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တစ်ဦးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး အမှန်တကယ် porn စွဲ။
ဤလေ့လာမှုအချို့တွင်“ ဘာသာတရား” နှင့်“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု” နှစ်ခုစလုံးသည်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်များ။ ထိုကြောင့် Grubbs နှင့်သူ၏သင်း၏ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများသည်အရှက်ကွဲခြင်း-သွေးဆောင် "ညစ်ညမ်းစွဲအတွက်ယုံကြည်ချက်," အမှန်တကယ်မဟုတ်ညစ်ညမ်းစွဲရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။
အမျိုးမျိုးသော CPUI-9 လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးဆောင်းပါးများအဖြစ်ကဤတွေ့ရှိချက်တက် Sum:
ဘာသာရေးဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုအမှန်တကယ်စွဲလမ်းခြင်းမရှိကြပါ (CPUI-9 တွင်အမြင့်ဆုံးရသော်လည်း) သူတို့သည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုခံစားနေရခြင်းဖြစ်သည်။
ဤသည်၌ ထူးခြားသော 2016 စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဆောင်းပါးယောရှုသည် Grubbs porn စွဲဘာသာရေးအရှက်ကွဲခြင်းထက် ပို. ဘာမျှကြောင်းဟုဆိုကာ, မိမိအမြင်များကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်:
Bowling Green တက္ကသိုလ်စိတ်ပညာ၏လက်ထောက်ပါမောက္ခ Joshua Grubbs က "အပြာစွဲလမ်းသူ" ကိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး မှဖြစ်စေ၊ သူကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်စေတံဆိပ်ကပ်ခြင်းသည်လူသားတစ် ဦး မြင်တွေ့ရသည့်ညစ်ညမ်းမှုပမာဏနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းအစား၎င်းသည်ဘာသာရေးနှင့်ဘာသာရေးအပေါ်လိင်အပေါ်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်သူက "ဒါဟာရှက်စရာပဲ" လို့ပြောတယ်။
Grubbs ၏အထက်ပါဖော်ပြချက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ သူ၏လေ့လာမှုများက“ ယောက်ျားတစ် ဦး မြင်တွေ့ရသောအရေခွံအရေအတွက်” သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည် အများကြီး porn စွဲခြင်း (CPUI-9 အပေါ်ရမှတ်များ) နှင့်ဆက်စပ်သော.
... .Grubbs က၎င်းကို "ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှု" ဟုခေါ်သည်။ "ဒါဟာအခြားစွဲလမ်းနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားအလုပ်လုပ်သည်။ "
As ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။, 2017 ဖော်ပြသည်, CPUI-9, တကယ်တော့, "ရိပ်မိ porn စွဲ" အကဲဖြတ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည် ပြီးတော့ အမှန်တကယ် porn စွဲ အလွန်ကိုအခြားစှဲနဲ့တူရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို.
အောက်ဆုံးလိုင်း: ၏ရလဒ်များကို ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။, 2017 ရာအရပျ အားလုံး လေးနက်သောသံသယအတွက် CPUI-9 ရလဒ်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီးအခိုင်အမာ, နှင့်ရရှိလာတဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အပေါငျးတို့သ။
“ ရိပ်မိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှု” မေးခွန်းလွှာနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာများ (CPUI-9)
လေ့လာမှုအသစ်၏အရေးပါမှုကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံး Cyber ​​Pornography အသုံးပြုမှုစာရင်းကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည် (CPUI-9) ။ မှတ်သားရန်အရေးကြီး:
CPUI-9 ကိုအပိုင်းသုံးပိုင်း ခွဲ၍ မေးခွန်း ၃ ခုစီပါ ၀ င်သည် (“ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲ” မေးခွန်းများကိုအထူးသတိပြုပါ) ။
မေးခွန်းတစ်ခုစီကို Likert စကေး ၁ မှ ၇ အထိ အသုံးပြု၍ ၁ ခုသာရှိသည်။အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး, "နှင့်7ဖြစ်ခြင်း"အလွန်။ "
Grubbs သည်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါသူသည်ထိုထက်မကသောအရာကိုဆိုလိုသည် စုစုပေါင်းရမှတ် မိမိအ CPUI-9 စမ်းသပ်မှုအပေါ်ပေမယ့်စမ်းသပ်မှုအမှန်တကယ်စွဲ "ရိပ်မိ" စွဲလမ်းအမှန်တကယ်စွဲခြင်းနှင့်ခွဲခြားလို့မရပါဘူး။
အဆိုပါ CPUI-9 ဆန်းစစ်၏စာရေးဆရာများအားဖြင့်ထိတွေ့သုံးထင်ရှားတဲ့အမှန်တရားထုတ်ဖော်ပြသ ဖာနန်ဒက်ဇ et al။ , 2017 (နှင့်ထဲမှာ YBOP ဝေဖန်မှု):
CPUI-9 သည်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု (“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု”) ကိုယုံကြည်ရုံမျှသာဖြစ်သည်ကို ခွဲခြား၍ မရပါ။
ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုပုဒ်မ (မေးခွန်းများကို 1-6) တစ်ဦး၏လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာကိုအကဲဖြတ် အမှန်တကယ် အပြာစာပေစွဲလမ်းမှု (“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲစွဲလမ်းမှု” မဟုတ်ပါ) ။
“ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခ” မေးခွန်းများ (၇-၉) သည်အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်အပြစ်ရှိသည်ကိုအကဲဖြတ်သည်။ မည်သည့်ဆေးစွဲမှုကိုမဆိုအကဲဖြတ်ခြင်းတွင်မတွေ့ပါ။
ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်ပေးသွားမှာပါ ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။, 2017 ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ချက်များနှင့်အတူ၎င်း၏တွေ့ရှိချက်ကနေကောက်နှုတ်ချက်အားဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
အပိုင်း 2: ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။, 2017 - ဒီဇိုင်း & တွေ့ရှိချက်များ
တစ်အကျဉ်းဖော်ပြချက် ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။, 2017:
ဒါဟာ 14 နေ့ရက်ကာလအဘို့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်သင်တန်းသားများကိုမေးမလျှောက်သောတစ်မူထူးခြားတဲ့လေ့လာမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ (လေ့လာမှုတစ်ခုသာလက်တဆုပ်စာ ယင်း၏သက်ရောက်မှုထုတ်ဖေါ်ဖို့အရှိဆုံးတည်ပြီးသတ်တယ်နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်သည့်ညစ်ညမ်းတို့ကိုရှောင်သင်တန်းသားများကိုမေးမွနျးခဲ့ကြ။ ) ပါဝင် porn abstinence မှာသူတို့ရဲ့9ရက်ကြာကြိုးပမ်းမှုမီနှင့်ပြီးနောက် CPUI-14 ယူခဲ့ပါတယ်။ (မှတ်ချက်: သူတို့က, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ်လိင်ကနေမှသာညစ်ညမ်းရှောင်ကြဉ်ကြဘူး။ ) သုတေသီများ၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာရမှတ်များမတိုင်မီနှင့် 'ပြီးနောက်' နှိုင်းယှဉ်ရန်ဖြစ်သည်3ကဏ္ဍများ အောက်ပါဖို့ CPUI-9 ၏3variable တွေကို:
1) အမှန်တကယ် compulsive. သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြဆိုတဲ့အချက်ကိုသုတေသီတိုင်းတာရန်ခွင့်ပြု အမှန်တကယ် (porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမှလေးစားမှုနှင့်အတူ) compulsive ။ အဆိုပါသုတေသီများ၏ဖော်မြူလာကိုအသုံးပြု "abstinence X ကို abstinence အားထုတ်မှုကြိုးစားနေပျက်ကွက်" တိုင်းတာရန် အမှန်တကယ် compulsive ။ ဤသည်ကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ် အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမေးခွန်းလွှာ (CPUI-9) တွင်ဘာသာရပ်များ၏ရမှတ်များကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်း။
2) အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု frequency. ဘာသာရပ်များ၏လေ့လာမှုမတိုင်မီအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှုန်းအကြိမ်ရေ။
3) ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏မေးခွန်းလွှာ။ အဆိုပါ CPUI-9 တာအပြင်, ဖာနန်ဒက်ဇရဲ့ သုတေသီများ CPUI-9 မေးခွန်းများကိုအတူယင်း၏ရလာဒ်များပတျသကျနိုင်အောင်ဘာသာရပ်များ, တစ်ဦးကငျြ့တရားမရရှိခြင်း၏မေးခွန်းလွှာကိုယူ။ ညစ်ညမ်း၏ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏ (7 နေ 1-အမှတ် Likert စကေးအပေါ် rated လေးပစ္စည်းများဖြင့်တိုင်းတာခဲ့သည်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး) (7 မှအလွန်):
“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု” မေးခွန်း ၄ ခုမှ ၃ ခုသည်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုပါဝင်သည်ကိုသတိပြုပါ။
ဘာကိုစူးစမ်းလေ့လာကြပါစို့ ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။, 2017 အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်က CPUI-9 နှင့် CPUI-9 အလုပ်သမားလေ့လာမှုများအတွက်ထွက်ထားကောကျခကျြနဲ့ပတျသကျတဲ့ပြောတာပေါ့အဘယျသို့။
အဘယျသို့ပွုခဲ့ ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။, 2017 အစီရင်ခံစာ?
တွေ့ရှိချက် #1: 1) စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်များ, 2) "ခံစား compulsive" မေးခွန်းများကိုနှင့် 3): porn အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည် အမှန်တကယ် compulsive (abstinence X ကို abstinence အားထုတ်မှုကြိုးစားနေပျက်ကွက်) ။ သို့သော်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းခဲ့သည် သက်ဆိုင်တဲ့ “ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခ” မေးခွန်း ၇-၉ ကို (အပြစ်ရှိတယ်၊ အရှက်ခွဲတယ်ဆိုတာကိုအကဲဖြတ်) ။
ဘာသာပြန်ချက်: အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်ကတိုင်းတာဘယ်လို, အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုသည်မြင့်မားသော porn အသုံးပြုမှုနှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ သို့သော်အပြစ်ရှိမှုနှင့်အရှက်ရစေသောမေးခွန်းများ ၇-၉ သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု (သို့မဟုတ်“ ရိပ်မိသောအစွဲစွဲလမ်းမှု” ပင်) ၏အကဲဖြတ်မှုတွင်မပါ ၀ င်သင့်ပါ။ “ စိတ်လှုပ်ရှားမှု” မေးခွန်း ၃ ခုသည်မပတ်သက်ပါ။ စင်စစ်အားဖြင့်သူတို့သည် CPUI-7 ရလဒ်များကိုလွဲချော်သွားသည်။
1 ကိုယူသှား: Grubbs လေ့လာမှုများ (သို့မဟုတ် CPUI-9 ကိုသုံးသောလေ့လာမှု) သည်“ စွဲလမ်းသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” သို့မဟုတ်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအပေါ်ယုံကြည်မှု” သို့မဟုတ်“ သူတို့ကိုယ်သူတို့အားစွဲလမ်းသည်ဟုတံဆိပ်ကပ်ခြင်းများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။" "ဆိုတာကိုသတိရဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါဟာင်ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ"ဟုအဆိုပါ CPUI-9 အပေါ်စုစုပေါင်းရမှတ်ထက်ပိုဘာမျှဖော်ပြသည်။ ကဲ့သို့သောတစ်ဦးကခေါင်းစဉ် “ သင်၌စွဲလမ်းမှုရှိသည်ဟုယုံကြည်ခြင်းသည်သင်၏ပြPနာ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်၊ လေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များ” ယခုအဖြစ် re-အနက်ရပါမည် လေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များအရ“ အပြာစွဲစွဲခြင်းသည်သင်၏ပြPနာ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ” သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာင် "ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု" အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုအတွက်သိပ္ပံနည်းကျထုံးတမ်းစဉ်လာမရှိပါ, ထို CPUI-9 ကဲ့သို့သောအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
2 ကိုယူသှား: အပြစ်ရှိ & အရှက်ကွဲစေသောမေးခွန်းများ ၇-၉ သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမေးခွန်းလွှာတွင်နေရာလုံးဝမရှိပါ၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်စုစုပေါင်း CPUI-7 ရမှတ်များလွဲချော်နေသောကြောင့် ဝေးအောက်ပိုင်း Non-ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများအတွက်, နေစဉ် မြှ ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများအတွက်ရမှတ်များ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဘုရားသခင်မဲ့ဝါဒီနှင့်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသောခရစ်ယာန်တစ် ဦး သည် CPUI-9 မေးခွန်းများ ၁-၆ နှင့်တူညီသောရမှတ်များရှိပါက၊ ဒီဂရီမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေမေးခွန်းများ ၇-၉ ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်ခရစ်ယာန်သည်ပိုမိုမြင့်မားသော CPUI-1 ရမှတ်များဖြင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟုနီးစပ်သည် တစ်ခုခုကိုဘာသာရပ်အတွက်စွဲ၏။
ထုတ်ယူသွားမည် 3: အပြစ်ရှိကြောင်းနှင့်အရှက်ကွဲစေသောမေးခွန်းများ ၇-၉ မှပယ်ဖျက်ခြင်းသည်“ အချိန်ကာလ၏ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း” (ဘာသာတရားမဟုတ်) သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၏အကြီးမားဆုံးကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်း, "စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ" မေးခွန်းများကိုသော်လည်းမနှင့်အတူ "ယာနျဘာသာတရားကို" နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပတျသကျ "porn အသုံးပြုမှုနာရီ။ " ဆောင်းပါးတွေကိုလှညျ့စားမှဆန့်ကျင်, ပြော တွေ့ရသော CPUI-9 လေ့လာမှုများ porn အသုံးပြုမှုအဆင့်မြင့်ဒါခေါ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်း "ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ။ "
တွေ့ရှိချက် #2: ၁) စုစုပေါင်း CPUI-1 ရမှတ်များနှင့် (၂)“ ရိပ်မိနိုင်စွမ်း” မေးခွန်းများနှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်ပျက်ကွက်သည့်ကြိုးပမ်းမှု မဟုတ် “ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲခက်ခဲမှု” မေးခွန်း ၇-၉ ကိုကြည့်ပါ။
ဘာသာပြန်ချက်: CPUI-9 ဆက်နွယ်နေကြောင်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း အမှန်တကယ် စွဲမေးခွန်းများ 1-6, ဒါပေမယ့်အပြစ်ရှိတယ် & အရှက်ကွဲမေးခွန်းများကို 7-9 ။
ထုတ်ယူသွားမည်: နောက်တကြိမ်, CPUI-9 1-6 အကဲဖြတ်ရန်မေးခွန်းထုတ် အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းသောအပြစ်စွဲခြင်းနှင့်အရှက်ကွဲခြင်းဆိုင်ရာမေးခွန်း ၇-၉ မှမလုပ်နိုင်ပါ။ “ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခ” မေးခွန်းများပါ ၀ င်ခြင်းသည်ဝေးကွာစေသည် အနိမ့် porn စွဲနှင့်ဝေးဘို့ CPUI-9 ရမှတ်များ ပိုမိုမြင့်မား ရုံ CPUI-9 ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းများအတွက်ရမှတ်များ, ဒါမှမဟုတ် porn ကို အသုံးပြု. ခံရဖို့မကြိုက်တတ်တဲ့မယ်လို့သူမည်သူမဆိုအကြောင်းကို။
တွေ့ရှိချက် #3: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကို“ မနှစ်မြို့ခြင်း” သည် ၁) စုစုပေါင်း CPUI-1 ရမှတ်များနှင့် (၂) စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာမေးခွန်းများနှင့်အလွန်ဆက်စပ်နေသည်။ သို့သော်“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု” သည် CPUI-9“ Perceived Compulsivity” ရမှတ်များနှင့်အနည်းငယ်သာဆက်စပ်မှုရှိသည်။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့, အများဆုံးစွဲဘာသာရပ်များစျယာနျဘာသာတရားကိုအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်းခဲ့ပါဘူး။
ဘာသာပြန်ချက်: "ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရိတ္တပျက်ခြင်းသည် CPUI-9 အပြစ်ရှိမှုနှင့်ရှက်ဖွယ်မေးခွန်း ၇-၉ နှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့မေးခွန်း ၇-၉ က သာ အကြောင်းပြချက် "ကိုယ်ကျင့်တရားမကျေနပ်မှု" Total CPUI-9 ("ရိပ်မိ porn စွဲ") နှင့်ဆက်စပ်သော။ “ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခ” မေးခွန်းများသည်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအပေါ်ယုံကြည်မှု” သည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟူသောအထင်အမြင်လွဲမှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
1 ကိုယူသှား: အပြစ်ရှိသည်နှင့်အရှက်ကွဲစေသောမေးခွန်းများ (၇-၉) ကိုပယ်ဖျက်ခြင်းသည်“ ညစ်ညမ်းသောကျင့်ဝတ်နှင့်ညီညွတ်ခြင်း” ကြောင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ရုံအများကြီးပိုမိုမြင့်မား CPUI-9 ရမှတ်များရှိသည်ဖို့ porn (အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း) ကို အသုံးပြု. ခံရဖို့မကြိုက်တတ်တဲ့မယ်လို့သူမည်သူမဆိုအကြောင်းကိုအပြစ်ရှိတယ်, အရှက်ကွဲအကြောင်းမရှိအကဲဖြတ်အဆိုပါ "စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ" မေးခွန်းများကို။
2 ကိုယူသှား: အပြစ်ရှိသည်နှင့်အရှက်ကွဲစေသောမေးခွန်း ၇-၉ တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသည်“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်း” နှင့်စုစုပေါင်း CPUI-7 (ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု) အကြားအတုအားဖြင့်ခိုင်မာသောဆက်နွယ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များသည်“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု” နှင့်“ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခ” မေးခွန်းများကိုအလွန်အမှတ်ရစေသည့်အချက်ကအထောက်အထားမရှိသောပြောဆိုမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ဘာသာရေးကလူ သူတို့ကိုယ်သူတို့ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကို“ ရိပ်မိ” ရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် (“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” သည်အတိုကောက်ဖြစ်သည် "စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်") ။ သို့ရာတွင်၊ ဤအရာသည်မမှန်ပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့“ အပို” ကဘာသာရေးလူတွေကိုမေးခွန်း ၇-၉ နဲ့ ၀ င်ငွေရစေတယ် စွဲလမ်းတိုင်းတာပါဘူးသို့မဟုတ်စွဲ၏ပင် "သညာ" ။ သူတို့ကပconflictိပက္ခဖြစ်နေသောတန်ဖိုးများကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုသာတိုင်းတာသည်။
3 ကိုယူသှား: ဘာသာရေးသမားများသည်“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်း” နှင့်“ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲခြင်း” မေးခွန်းများကိုအလွန်အမှတ်ရကြသည်။ CPUI-9 အခြေစိုက်လေ့လာမှုများသာဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးဒဏ္ဍာရီဖန်တီးရန် "ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏" နှင့်3"စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ" မေးခွန်းများကိုအကြားဆက်စပ်မှုမွေးစားခဲ့ကြ ယုံကြည် သူတို့ porn စွဲနေကြတယ်။ သို့သော်၊ ဤမေးခွန်းများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၊ “ ယုံကြည်မှု” နှင့်“ စွဲလမ်းမှု” အပေါ်တွင် မူတည်၍ အကဲဖြတ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ဤကိရိယာတွင်မရှိတော့ပါ။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, CPUI-9 အားဖြင့်မွေးထုတ်အဆိုပါသုံးသပ်ချက်နှင့်တောင်းဆိုမှုများရိုးရှင်းစွာမမှန်ပါ။ ယောရှုသည် Grubbs မနိုင်တစ်မေးခွန်းလွှာ created နှင့် အမှန်တကယ်စွဲကနေ "ကိုရိပ်မိ" sorting များအတွက်အတည်ပြုဘယ်တော့မှခဲ့သည်: အ CPUI-9 ။ နှင့် သုညသိပ္ပံနည်းကျမျှတမှု he Re-တံဆိပ်ကပ် မိမိအ CPUI-9a"ကိုရိပ်မိ၏ညစ်ညမ်းစွဲ" မေးခွန်းလွှာအဖြစ်။
အဆိုပါ CPUI-9 အပြစ်ရှိတယ်, အရှက်ကွဲအကဲဖြတ်3ဆိုတဲ့စကားလုံးမလိုတော့ဘူးမေးခွန်းများကိုထည့်သွင်းသောကြောင့်, ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများ၏ CPUI ရမှတ်များသည်အထက်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုမြင့်မား CPUI-9 ရမှတ်၏တည်ရှိမှုထို့နောက်ကြောင်း, "ဆိုသကဲ့သို့မီဒီယာမှကျွေးမွေးခဲ့သည်ဘာသာရေးကလူမဟုတ်မမှန်သူတို့ porn စွဲဖြစ်ကြသည်ယုံကြည်။ "ဒီအတော်ကြာလေ့လာမှုများအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည် CPUI-9 ရမှတ်များနှင့်အတူ correlating ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ဘာသာရေးကလူစုစုပေါင်း CPUI-9, (အရှင်) ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်းနှင့်ကတည်းက ဒါကြောင့်အသံထွက်ခဲ့သည် ဘာသာရေး-based ကငျြ့ဝတျမရရှိခြင်း၏ယင်းကြောင်း (အမှန်တကယ်ထောက်ခံမှုမပါဘဲ) စစ်မှန်တဲ့ ညစ်ညမ်းစွဲ၏အကြောင်းမရှိ။ ဒါကတော်တော်လေးခုန်နှင့်သိပ္ပံများ၏ကိစ္စအဖြစ်ညျမတရားမှုပါပဲ။
ကျနော်တို့အနေဖြင့်ယခုပစ္စုပ္ပန်ကောက်နှုတ်ချက်လိမ့်မည် ဖာနန်ဒက်ဇ et al။ , 2017 မှတ်ချက်များနှင့်ရှင်းလင်းထားသည့်ပုံရိပ်တွေဖြင့်လိုက်ပါသွား။
အပိုင်း 3: ၏ကောက်နုတ်ချက် ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။, 2017 (မှတ်ချက်နှင့်အတူ)
၏ဆှေးနှေးခအပိုင်း ဖာနန်ဒက်ဇ et al။ , 2017 သုံးခုအဓိကတွေ့ရှိချက်များ, သုံးသီအိုရီသက်ရောက်မှုများနှင့်နှစ်ဦးကိုလက်တွေ့သက်ရောက်မှုပါရှိသည်။ သူတို့ကလိုက်နာပါ။
ပထမဦးစွာအဓိကတွေ့ရှိချက်ဖြေ - CPUI-9“ ရူပဗေဒရူပဗေဒ” မေးခွန်းများကိုအကဲဖြတ်သည် အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းသောစွဲစွဲလမ်းမှုကိုမယုံကြည်နိုင်ခြင်း
ဖာနန်ဒက်ဇ et al။ , 2017 ဘယ်လိုဆွေးနွေးရန် အမှန်တကယ် compulsivity ရမှတ်များသည် CPUI-9“ Perceived Compulsivity” မေးခွန်းများ၏ရမှတ်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ သို့သော် မဟုတ် သည် "စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ" မေးခွန်းများကိုအတူ။
ကျနော်တို့ abstinence ကြိုးစားမှုကငျြ့ဝတျမရရှိခြင်း၏များအတွက်ထိန်းချုပ်ရန်ပိုမိုမြင့်မား CPUI-9 ရမှတ်များ, ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ abstinence ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်မယ်လို့ပျက်ကွက်သောငါတို့ဒုတိယအယူအဆများအတွက်တစိတ်တပိုင်းပံ့ပိုးမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သျောလညျး ဒီဆက်နွယ်မှုခံစား compulsive ရမှတ်များမဟုတ်, စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရမှတ်ကန့်သတ်ခဲ့သည် နှင့် CPUI-9 အပြည့်အဝစကေးရမှတ်များ။ ပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှုမြင့်မားဖြစ်ကြပြီး abstinence အားထုတ်မှုမြင့်မားတဲ့အခါအထူးသသည်, ခံစား compulsive subscale အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်. ဤသည်တွေ့ရှိချက်က compulsive ၏သဘောထားအမြင်ကိုအထောက်အကူပြုရန်ပေးသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမျှသာအကြိမ်ရေမဟုတျကွောငျးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆိုပြုနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဤသည်လည်းတစ်ဦးအညီအမျှအရေးကြီးသော variable ကိုအပေါ်မူတည်မယ်လို့, abstinence အားထုတ်မှု။ ယခင်ကလေ့လာမှုတွေရှိ အဆိုပါ CPUI-9 အချို့ကှဲလှဲဘို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကောင့်အသစ်များ၏ကြောင်းအကြိမ်ရေသရုပ်ပြ (Grubbs et al, 2015a; ။ ။ Grubbs et al, 2015c), ဒါပေမယ့်တစ်ဦးတည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ compulsive ၏ရှေ့မှောက်တွင်အခြဖို့လုံလောက်သောမဟုတ်ပါဘူး (Kor et al ။ , 2014) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတချို့တစ်ဦးချင်းစီမကြာခဏ IP ကိုကြည့်ရှုခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့် IP ကိုရှောင်ထဲမှာသိသိသာသာကွိုးစားမကျမည်အကြောင်း posits ။ ကဲ့သို့သော, သူတို့ကရှောင်ကြဉ်ရန်မရည်ရွယ်ရှိခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှု, မည်သည့်လမ်းအတွက် compulsive ခဲ့ခံစားခဲ့ရဖူးဘူးလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်သစ်တစ်ခု variable ကိုအဖြစ် abstinence အားထုတ်မှု၏ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုရဲ့နိဒါန်းအရေးပါသောအလှူငွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီညစ်ညမ်း (ဆိုလိုသည်မှာမြင့်မား abstinence အားထုတ်မှု) မှရှောင်ကြဉ်ဖို့ခဲယဉ်းကြိုးစားခဲ့အခါ, ခန့်မှန်းပေမယ့်အများကြီးမအောင်မြင်မှုများ (ဆိုလိုသည်မှာမြင့်မားပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှု) တွေ့ကြုံအဖြစ်ဤခံစား compulsive subscale အပေါ် သာ. ကြီးမြတ်ရမှတ်များနှင့်အတူ aligned ။
SUMMARYပထမ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေသည် CPUI-9“ Perceived Compulsivity” မေးခွန်းများနှင့်အလွန်ဆက်စပ်နေသည် အမှန်တကယ် compulsive ( "abstinence X ကို abstinence အားထုတ်မှုကြိုးစားနေပျက်ကွက်") ။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ရပ်တန့်ရန်ခက်ခဲစွာကြိုးစားသော်လည်းမအောင်မြင်ပါကညစ်ညမ်းသူများသည် CPUI-9“ Perceived Compulsivity” မေးခွန်းများတွင်အများဆုံးရမှတ်များရှိသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် CPUI-9 မေးခွန်းများကို ၁-၃ ကအကဲဖြတ်သည် အမှန်တကယ် “ စွဲလမ်းမှုအပေါ်ယုံကြည်မှု” ထက် (compulsivity) ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ဟူသောအယူအဆကိုထောက်ခံမှုမပေးနိုင်ပါ။
တတိယအချက်အနေဖြင့်“ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခ” မေးခွန်းများ (အပြစ်ရှိခြင်းနှင့်အရှက်ခွဲခြင်းကိုအကဲဖြတ်ခြင်း) သည်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်အရေးမပါလှပါ။ ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုမနှစ်သက်သောသူများအတွက်စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်များလျော့နည်းစေရန်လုပ်ဆောင်သည်
အမြင်အာရုံအခြေအနေကိုကြည့်ရအောင်။ ဤတွင်အောက်ပါစားပွဲနှင့်ပုံရိပ်တွေထဲမှာနံပါတ်များကိုနားလည်သဘောပေါက်တချို့အကြံပေးချက်များနေသောခေါင်းစဉ်: သုညနှစ်ခု variable တွေကိုအကြားမျှဆက်စပ်မှုကိုဆိုလိုသည်; 1.00 နှစ်ခု variable တွေကိုအကြားတစ်ဦးပြည့်စုံဆက်စပ်မှုကိုဆိုလိုသည်။ အရေအတွက်2variable တွေကိုအကြားဆက်စပ်မှုဟာပိုမိုအားကောင်းအဆိုပါပိုကြီး။ နံပါတ်တစ်ရှိပါက အနှုတ် သင်္ကေတ၊ ဆိုလိုတာကအရာနှစ်ခုကအဆိုးဆက်နွယ်မှုရှိတယ်။ (ဥပမာအားဖြင့်၊ လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်နှလုံးရောဂါအကြားအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပုံမှန်ဘာသာစကားတွင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း လျော့နည်းစေ နှလုံးရောဂါ၏အခွင့်အလမ်းတွေကို။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အဝလွန်ခြင်းတစ်ဦးရှိပါတယ် အပြုသဘောဆက်စပ်မှု နှလုံးရောဂါနှင့်အတူ။ )
ကျနော်တို့အနေဖြင့်ဆက်စပ်မှု၏စားပွဲနှင့်အတူစတင် ဖာနန်ဒက်ဇ et al။ , 2017 ။ နံပါတ် ၁ သည်“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှုန်းအကြိမ်ရေ” ဖြစ်သည်။, CPUI-9 "ရိပ်မိ Compulsivity" မေးခွန်းများကို (0.47), Abstinence အားထုတ်မှု (0.28) နှင့်ပျက်ကွက် Abstinence ကြိုးစားမှု (0.47) ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်နွယ်သော။ porn အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေဖြစ်ခဲ့သည် သက်ဆိုင်တဲ့ "စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ" မေးခွန်းများကို (0.05) နှင့် အနုတ်လက္ခဏာ "ကိုယ်ကျင့်တရားမကျေနပ်မှု" (ဆက်နွယ်မှု)-0.14) ။
“ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခ” မေးခွန်း ၃ ခုမပါဘဲရလာဒ်များကိုအငြင်းပွားခြင်း -“ ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ” သည်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုအများဆုံးကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ မရစျယာနျဘာသာတရားကို! အဖြစ် ဖာနန်ဒက်ဇ et al။ Grubbs အဖွဲ့များမှပြုလုပ်သော CPUI-9 လေ့လာမှုများအားလုံးအတွက်အထက်ပါဆက်စပ်မှုများသည်ဆင်တူသည်။
“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှု” လေ့လာမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းသည်တည်မှီနေသည် အဆိုပါအခြေအမြစ်မရှိအခိုင်အမာ စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်များသည်“ လက်ရှိအသုံးပြုသောလက်ရှိနာရီများ” နှင့်လုံး ၀ ဆက်နွယ်သင့်သည်။ သုတေသီများက - အကယ်၍ လူတစ် ဦး ၏ CPUI-9 ရမှတ်များမှာအတော်အတန်မြင့်မားပြီး၊ သူတို့၏“ နာရီအသုံးပြုမှုနာရီ” မှာသာလွန်မြင့်မားပါကလူတစ် ဦး သည်၎င်းတို့ကိုစွဲလမ်းသည်ဟုမှားယွင်းစွာယုံကြည်သည်။ ဒီအခိုင်အမာ၏ဂရပ်ဖစ်ကိုယ်စားပြုမှု:
သို့သျောလညျးအဖြစ် ဖာနန်ဒက်ဇ et al. နှင့်အခြားသောလေ့လာမှုများ ထောက်ပြ, porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏လက်ရှိအဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပါသည် စွဲလမ်း၏စိတ်မချရအတိုင်းအတာ။ ပို. အရေးကြီးသည်, အ3"စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ" မေးခွန်းများကိုသည်အလွန်အသုံးကြိမ်နှုန်းနှင့်စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်များအကြားဆက်စပ်မှုအားနည်းစေ။
အဓိကအချက် -“ ရူပဗေဒအရစွဲလမ်းမှု” သို့မဟုတ်“ စွဲလမ်းသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” စသည့်အရာများမရှိပါ။ အကယ်၍ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်ညစ်ညမ်းသောဆေးစွဲမှုကိုစစ်ဆေးသည့်အခါ၎င်းသည်သူသည်အမှန်တကယ်စွဲခြင်း၏လက္ခဏာနှင့်လက္ခဏာများကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအဆင့်ကို proxy တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်ဟုယူဆခြင်းသည်သိပ္ပံနည်းကျမသင့်လျော်ပါ အမှန်တကယ် porn စွဲ (များစွာသောလေ့လာမှုတွေကောက်ချက်ချသကဲ့သို့) ။
ဒုတိယအချက်မှာအဓိကတွေ့ရှိချက်: CPUI-9“ ရိပ်မိ Compulsivity” မေးခွန်းများနှင့်ဆက်နွယ်နေမှုကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ပိုမိုအားစိုက်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်
ဖာနန်ဒက်ဇ et al။ , 2017 ထောက်ပြရန်ပိုမိုအားထုတ်မှုလိုအပ်နေ CPUI-9 "ရိပ်မိ Compulsivity" မေးခွန်းများနှင့် porn အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနှင့်အတူပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းလိုအပ်ပေမယ့် "စိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဆင်းရဲ" မေးခွန်းများကိုမထောက်ပြ:
စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ဦးချင်းခန့်မှန်းအဖြစ် abstinence ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုလည်းခံစား compulsive subscale နှင့်အတူသိသိသာသာအပြုသဘောကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆက်ဆံရေးမျိုး (သို့သော်မစိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale နှင့် CPUI-9 အပြည့်အဝစကေး) သရုပ်ပြဒီဆက်ဆံရေးဟာတစ်ဦးတွေးဆမခံခဲ့ရပေမယ့်, ပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှုများနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏အဘို့ကိုထိန်းချုပ်။ ကျနော်တို့ကတကယ်တော့ပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှုကြုံတွေ့တဲ့သူမှသာတစ်ဦးချင်းစီ compulsive ၏သဘောထားအမြင်မှဦးဆောင်သူတို့ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူကနေ compulsive အခြအံ့သောငှါပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ သို့သျောလညျး ငါတို့သည် သာ. abstinence ကွိုးစားအားထုခံစား compulsive subscale အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်ခန့်မှန်းကြောင်းတွေ့ရှိရ, ဤဆက်ဆံရေးဟာပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှုပင်လွတ်လပ်သောမြင်ကြခဲ့။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် သူ့ဟာသူနှင့်များ၏ညစ်ညမ်းမှရှောင်ကြဉ်ဖို့ကြိုးစားနေအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက် compulsive ၏သဘောထားအမြင်မှဆက်စပ်ကြောင်းအရေးကြီးသောဆိုလိုရှိပါတယ်။
SUMMARY: ပထမတွေ့ရှိချက်နှင့်ဆင်တူသည် CPUI-9“ Perceived Compulsivity” မေးခွန်းများ၏ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များသည်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အမှန်တကယ် compulsivity (ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားရန်မြင့်မားသောအားထုတ်မှုလိုအပ်ခြင်း) ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် CPUI-9“ ရူပဗေဒရူပဗေဒ” သည်မေးခွန်းများကိုအကဲဖြတ်သည် အမှန်တကယ် compulsivity ။ သို့သော်၊ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ပိုမိုကြိုးစားအားထုတ်ရန်လိုအပ်သည်မှာအပြစ်ရှိခြင်း၊ အရှက်ကွဲခြင်း (သို့) နောင်တ (“ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခ” မေးခွန်းများ) နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရခြင်းနှင့်အရှက်ရခြင်းတို့သည်ဘာမျှမဆိုင်ပါဘူး အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှု၊
အဓိကအချက် -“ ရူပဗေဒအရစွဲလမ်းမှု” သို့မဟုတ်“ စွဲလမ်းသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” စသည့်အရာများမရှိပါ။ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများအတွက်ပိုမိုအမှတ်ရခြင်းနှင့်ထောက်ခံမှုမရှိသောကောက်ချက်နှင့်ခေါင်းစီးများ မှလွဲ၍“ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဒုက္ခ” မေးခွန်းများသည် CPUI-9 တွင်နေရာမရှိပါ။
တတိယအဓိကတွေ့ရှိချက်ဖြေ - ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုသည်“ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲ” မေးခွန်းများနှင့်ဆက်နွယ်သော်လည်းမပတ်သက်ပါ အမှန်တကယ် compulsive ဒါမှမဟုတ် CPUI-9 စွဲမေးခွန်းများကို (1-6)
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရိတ္တပျက်ပြားမှု” သည် CPUI-4 မဟုတ်သောမေးခွန်း ၄ ခု၏ဖြစ်ပြီး၊ CPUI-9“ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခ” မေးခွန်း ၃ ခုသည်အပြစ်နှင့်အရှက်ကိုခွဲခြားသိမြင်စေသည်။ ဖာနန်ဒက်ဇ et al။ , 2017 (နှင့်အခြား CPUI-9 လေ့လာမှုများ) က“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု” နှင့်ပတ်သက်မှုအနည်းငယ်သာရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် အမှန်တကယ် porn စွဲ။ အဆိုပါကောက်နုတ်ချက်:
ကျနော်တို့ CPUI-9 တစ်ခုလုံးအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အခါ, ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏တစ်ခုတည်းသောသိသိသာသာခန့်မှန်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သျောလညျး ပြိုပျက်အခါ, ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏အဆိုပါ CPUI-9 သာတိကျတဲ့ဒိုမိန်းသည်စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale (ဥပမာ, "ငါအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုပြီးနောက်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခံစားရတယ်") ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ခံစား compulsive subscale မသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်. ဤသည်ကိုသာစိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale မခံစား compulsive သို့မဟုတ် Access ကိုကြိုးပမ်းမှုများ subscales (et al တျောမူမညျ။ , 2016) နှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ညစ်ညမ်း၏ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏ဖေါ်ပြခြင်းယခင်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဤ ဒါ့အပြင်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏အစားသိမြင်မှုရှုထောင့် (ခံစား compulsive) ထက်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့် (Emotional ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ) ဖြစ်ပါသည်သော CPUI-9, တစ်မူထူးခြားတဲ့ရှုထောင့်အဘို့အကောင့်တစ်ခုကိုတျောမူမညျမှအထောက်အပံ့နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက '' တွေ့ရှိချက်ချေးငှားသည်။ ထို့ကြောင့်သည်, စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခနှင့်ခံစား compulsive subscales related နေကြတယ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကိုသူတို့သီးခြားကုသခံရဖို့လိုအပျကွောငျးအကြံပြု သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များမှတဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်သည်။
SUMMARY: ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုသည်“ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခ” မေးခွန်း ၃ ခုနှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ သို့သော် CPUI-3“ ရူပဗေဒရလွယ်သော” မေးခွန်းများနှင့်အနည်းငယ်သာဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု” သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲအပြစ်ရှိခြင်းနှင့်အရှက်ရခြင်းတို့နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ အောက်တွင်ကောက်နှုတ်ချက်၌ကိုးကားထားသောလေ့လာမှုမှဆက်စပ်မှုများ (et al တျောမူမညျ။ , 2016) ။ “ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု” နှင့် CPUI-9 အပိုင်းသုံးခုအကြားဆက်စပ်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
အခြား CPUI-9 လေ့လာချက်များကဲ့သို့ပင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်ယုံကြည်မှုသည်မှားယွင်းသည် (သို့) အပြစ်ရှိသောသူသည် CPUI-9“ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခ” အပိုင်း (၄) နှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ သို့သျောလညျး "ကိုယ်ကျင့်တရားမကျေနပ်မှု" နှင့်တရားဝင် CPUI-4 ညစ်ညမ်းစွဲမေးခွန်းများ ("Access အားထုတ်မှု", "ရိပ်မိ Compulsivity") အကြားအနည်းငယ်သာ (သို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာ) ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ ဖာနန်ဒက်ဇ et al။ အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်အပြစ်ရှိသည် (မေးခွန်း ၇-၉) ကိုအမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု (မေးခွန်း ၁-၆) မှသီးခြားစီစစ်ဆေးရန်လိုသည်။ သူတို့ကစွဲသို့မဟုတ် "ရိပ်မိ" စွဲအကဲဖြတ်ကြပါဘူး။
အဓိကအချက် - ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များလွဲချော်ရန် မှလွဲ၍ CPUI-9 တွင်“ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာမေးခွန်းများ” သည်နေရာမရှိပါ။ သုတေသီများအနေဖြင့်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရိတ္တပျက်ပြားခြင်း” နှင့်“ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဒုက္ခ” မေးခွန်းများအကြားသဘာဝဆက်စပ်မှုကို အသုံးချ၍ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကန့်ကွက်မှုများသည်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုယုံကြည်သည်” (Total CPUI-9 ရမှတ်) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဆိုသည်။ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများသည်“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု” နှင့်“ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခများ” နှစ်ခုစလုံးတွင်မြင့်မားသောကြောင့်သုတေသီများကမှားယွင်းစွာပြောဆိုကြသည် ဘာသာ porn စွဲကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, ဒါပေမယ့်လေ့လာမှုရလဒ်တွေကိုဒီဒါကြောင်းအနည်းငယ်သာသက်သေအထောက်အထားရောင်းချလျက်ရှိကြသည်။
သီအိုရီသက်ရောက်မှု #1: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္isာရီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုသည်အမှန်တကယ် porn စွဲလမ်းမှုတွင်မပါ ၀ င်ပါ။
ဖာနန်ဒက်ဇ et al။ , 2017 CPUI-9 "ရိပ်မိ Compulsivity" မေးခွန်းများကိုအကဲဖြတ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် အမှန်တကယ် compulsive နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏အမှန်တကယ် porn စွဲမအခန်းကဏ္ဍဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်သုံးအရေးကြီးသောသီအိုရီသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပထမဦးစွာလက်ရှိလေ့လာမှု CPUI-9 ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်အိုင်ပီမှရိပ်မိစွဲလမ်း, နှင့်အမှန်တကယ် compulsive အကြားယခင်က unexplored ကြားဆက်ဆံရေး elucidates ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာခုနှစ်, ကျနော်တို့ compulsive ၏သဘောထားအမြင်အမှန်ပင်အဖြစ်မှန်၏ရောင်ပြန်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ It ကိုတစ်ဦးအမှန်တကယ် compulsive ပုံစံ (abstinence ကြိုးစားမှု abstinence အားထုတ်မှု x ပျက်ကွက်) ထိုပုံနှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ် abstinence ကြိုးစားအားထုတ်မှု, အ CPUI-9 အပေါ်ရမှတ် compulsive subscale ခံစားကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ငါတို့သည်ဤဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတောင်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်ကိုင်ထားပြီးနောက်ကျင်းပကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်မသက်ဆိုင်တစ်ဦးချင်းကိုယ်ကျင့်တရားညစ်ညမ်းမနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၏, တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ခံစား compulsive ရမှတ်များအမှန်တကယ် compulsive ၏ရောင်ပြန်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြု, ဒါမှမဟုတ် IP ကိုရှောင်အတွက်အခက်အခဲများစွာအတွေ့အကြုံ။ ကျနော်တို့အမှန်တကယ် compulsive အမှန်တကယ်စွဲမှတူညီခြင်းမရှိပါစဉ် compulsive စွဲ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်တစ်ဦး IP ကိုအသုံးပြုသူအတွက်၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင် IP ကိုမှအမှန်တကယ်စွဲတစ်ခုအရိပ်အယောင်ဖြစ်အံ့သောငှါတင်ပြသည်။ ထိုကွောငျ့, လက်ရှိလေ့လာမှုရဲ့တွေ့ရှိချက်တချို့အတိုင်းအတာအထိနေ့စွဲလုပ်နိုင်တဲ့ဖို့ CPUI-9 အပေါ်သုတေသနပြုစွဲ၏မျှသာအမြင်တဘက်, အမှန်တကယ်စွဲကတာဝန်ယူရမည်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုမြှင့်.
SUMMARY: ဘယ်တော့လဲ ဖာနန်ဒက်ဇ et al။ CPUI-9“ Perceived Compulsivity” မေးခွန်းများကိုဆိုလိုသည်။ "Perceived Compulsivity" မှရမှတ်များနှင့်အတူ aligned အမှန်တကယ် compulsive (abstinence အားထုတ်မှု x abstinence ကြိုးစားမှုမအောင်မြင်ခဲ့) ။ ရိုးရှင်းစွာ ထား. , CPUI-9 1-3 အကဲဖြတ်ရန်မေးခွန်းထုတ် အမှန်တကယ် "ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုယုံကြည်ရန်" ထက် (compulsivity) အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း။ စာရေးသူများသည် CPUI-9 ၏ရမှတ်များနှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ဟူသောစကားစုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်သံသယများရှိသည်။ နောက်ဆုံး၌ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုအားအကဲဖြတ်ခြင်းကအမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအကြောင်းကိုဘာမျှမပြောပါ။
Grubbs မှပူးတွဲရေးသားသည့်အခြား CPUI-9 စက္ကူမှအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။စွဲလမ်းမှုအဖြစ်လွန်ကျူး: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှခံစားစွဲလမ်း၏ခန့်မှန်းအဖြစ်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးကိုယ်ကျင့်တရားမလိုက်နာခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည်ဟု၎င်း၏အငြင်းပွားဖွယ်ခေါင်းစဉ်ကဖော်ပြသည်။
သတိပြုရန်မှာ“ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာမေးခွန်းများ” သည်“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု” နှင့် Total CPUI-9 ရမှတ်များအကြားပြင်းထန်သောဆက်နွယ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုသတိပြုပါ။ မှတ်ချက် - Access Accessss (မေးခွန်းများ ၄-၆) သည်အဓိကစွဲလမ်းသည့်အပြုအမူများကို (အကြီးအကျယ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသော်လည်းအသုံးပြုမှုကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း) ကိုအကဲဖြတ်သည်။ သို့သော်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုနှင့်ဘာသာတရားနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
အဓိကအချက် -“ ရူပါရုံစွဲစွဲလမ်းမှု” ကဲ့သို့သောအရာမရှိပါ။ အကယ်၍ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်မှန်ကန်သောဆေးစွဲသည့်စစ်ဆေးမှုကိုအမြင့်ဆုံးရလျှင်၎င်းသည်သူ၏လက္ခဏာနှင့်လက္ခဏာများကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရသည်ဟုဆိုလိုသည် အမှန်တကယ် စွဲ။ သင်သည်စွဲစွဲလမ်းသည်ဟုယုံကြည်ပါက၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုခံစားရသလဲဆိုတာကအမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ တိကျမှန်ကန်စေရန်“ ရိပ်မိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲခြင်း” သို့မဟုတ်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းခြင်းအပေါ်ယုံကြည်မှု” စသည့် ၀ န်ထုပ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုတိကျစွာ“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းခြင်း” ဖြင့်အစားထိုးသင့်သည်။
သီအိုရီသက်ရောက်မှု #2: အမှန်တကယ် porn စွဲများအတွက်စုစုပေါင်း CPUI-3 ရမှတ်များထိခိုက်ပျက်စီးစေလျက်ရှိသည်စဉ်9"စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ" မေးခွန်းများကိုဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းများအတွက်စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်များဖောင်းပွ။
ဖာနန်ဒက်ဇ et al။ , 2017 အဆိုပါ3"စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ" မေးခွန်းများကို CPUI-9 အလုပ်မဆိုလေ့လာမှုကနေအားလုံးရလဒ်များကို skew ဘယ်လိုဆွေးနွေးပါ။
ဒုတိယအချက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက် CPUI-9 ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale များ၏ပါဝင်၏သင့်လျော်သောရက်တွင်သံသယကိုနှင်ထုတ်. အဖြစ်တသမတ်တည်းမျိုးစုံလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့ (ဥပမာ Grubbs et al ။ , 2015a, ဂ) ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ကိုလည်း IP ကိုအသုံးပြုအကြိမ်ရေစိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရမှတ်များနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ကွောငျးဖျောပွခဲ့. ပို. အရေးကြီးသည်, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ conceptualized အဖြစ်အမှန်တကယ် compulsive (ပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှု abstinence အားထုတ်မှု x) စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရမှတ်များနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်အမှန်တကယ် compulsive တွေ့ကြုံခံစားတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီသေချာပေါက်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့ကြုံခံစားကြဘူးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
အစား, စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရမှတ်များသိသိသာသာယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အညီ, ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏အားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြသည် အရာလည်းနှစ်ခုအကြားသိသိသာသာထပ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရ (Grubbs et al, 2015a; ။ et al ကစားမည်, 2016 ။ ) ။ ဒီတစ်ခုကငျြ့တရားမနှစ်သက်နှင့်အမှန်တကယ် compulsive မသက်ဆိုင်သောသောအပြုအမူအတွက်ပါဝငျမှုကြောင့်ခံစားခဲ့ရသည့် CPUI-9 ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဆင်းရဲ dissonance နေဖြင့်အဓိကအားဖြင့်အဘို့မှတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, CPUI-9 ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale များ၏ပါဝင်မှုကငျြ့တရားညစ်ညမ်းသဘောမတူတဲ့သူက IP အသုံးပြုသူစုစုပေါင်းရိပ်မိစွဲရမှတ် inflates နှင့် IP ကို၏စုစုပေါင်းရိပ်မိစွဲရမှတ် deflates ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ရလဒ်တွေကို skew စေခြင်းငှါ, မြင့်မားတဲ့ခံစားကြသူအသုံးပြုသူများသည် compulsive ရမှတ်များ, ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်း၏အနိမ့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏။
Tအဆိုပါစိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးလူဦးရေနှင့်အတူအသုံးပြုရန်တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့်တစ်ဦးကိုမူလ "ပွစျရှိသညျဟူသော" စကေးပေါ်တွင်အခြေခံကြောင့်မိမိအဖြစ်နိုင်ပါသည် (Grubbs et al ။ , 2010)non-ဘာသာရေးလူဦးရေနှင့်အတူနှင့်၎င်း၏ utility ကိုဒီစကေးနှင့်ဆက်စပ်သောနောက်ဆက်တွဲတွေ့ရှိချက်များအလငျး၌မရေမရာဖြစ်နေဆဲပင်။ "ဆေးခန်းကိုသိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲ" ရောဂါရှာဖွေသတ်မှတ်ထား B က, ဆေးခန်းသိသိသာသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒုက္ခဆင်းရဲ ... သောဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်လည်းမရှိ "ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်တိုကျတှနျးထားရှိရာ DSM-5 များအတွက် Hypersexual Disorder များအတွက်အဆိုပြုထားသည့်ရောဂါရှာဖွေစံအတွက်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် သို့မဟုတ်အပြုအမူ "(Kafka 2010, p ။ 379) ။ ငါt ကို၎င်းစိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale ဆေးခန်းသိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲ၏ဤအထူးသဖြင့်မျိုးသို့ပုတ်ကြောင်းသံသယဖြစ်ပါတယ်။ အချက်တွေကို phrased နေသောလမ်း (ဆိုလိုသည်မှာ, "ငါအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုပြီးနောက်ဖျားနာ / ရှက်ကြောက်ခြင်း / စိတ်ဓာတ်ကျခံစားရသည်") ဒုက္ခဆင်းရဲသည့်အကြိမ်ရေနှင့်ပြင်းထန်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်၏, တိုကျတှနျးထား, ဒါမှမဟုတ်အပြုအမူနဲ့ဆက်စပ်မရစရာမလိုဟု, ဒါပေမယ့်အကြောင်းကိုယူဆောင်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည် ရုံပင် non-compulsive လမ်းအတွက်အပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျးမှ။
SUMMARY: ဤသူကား အ အဓိကတွေ့ရှိချက်: အဆိုပါ3"စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ" မေးခွန်းများကို အဆိုပါ CPUI-9 မနေရာရှိသည်သို့မဟုတ်မည်သည့်ညစ်ညမ်းမှုစွဲမေးခွန်းမဆို။ ဒီအပြစ်ရှိတယ်၊ မဟုတ် ညစ်ညမ်းသောအကျင့်စွဲခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ စိတ်သောကရောက်ခြင်းများကိုအကဲဖြတ်ပါ။ ဤမေးခွန်း ၃ ခုသည်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများအတွက်စုစုပေါင်း CPUI-3 ရမှတ်များကိုဘာသာရေးအရမဟုတ်သောညစ်ညမ်းသောစွဲသူများအတွက်စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်များကိုလျှော့ချပြီးအတုခိုးသည်။
အခြားစွဲလမ်းမှုအမျိုးအစားများအတွက်အကဲဖြတ်မေးခွန်းလွှာများတွင်အပြစ်ရှိခြင်းနှင့်ရှက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများပုံမှန်အားဖြင့်မရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ သေချာပါတယ်အဘယ်သူမျှ ဒုစရိုက်ဖြေ, အရှက်ကွဲအကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့မေးခွန်း၏သုံးပုံတစ်ပုံပါစေ။ အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်း Disorder ထံမှဥပမာ, DSM-5 စံ 11 မေးခွန်းများကိုဆံ့။ သို့သျောလညျးမေးခွန်းများကိုအဘယ်သူမျှမသောက်မူးရူးပြီးနောက်နောင်တသို့မဟုတ်အပြစ်ရှိတယ်အကဲဖြတ်ရန်။ မ DSM-5 မ လောင်းကစားစွဲမေးခွန်းလွှာ နောင်တအပြစ်ရှိတယ်သို့မဟုတ်အရှက်ကွဲခြင်းအကြောင်းတစ်ခုတည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဆံ့။
အောက်ဆုံးလိုင်း: “ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခ” မေးခွန်း ၃ ခုနှင့်သူတို့ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းအပေါ်အခြေခံထားသောပြောဆိုချက်များနှင့်ဆက်စပ်မှုများအားလုံးကိုဖယ်ရှားပါ။ “ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခ” ၃ ခုသည် CPUI-3 ၏ရလဒ်များကိုမည်သို့လွဲချော်သွားသည်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့။
#1 ဆိုကြသည်: ပထမအချက်အနေနှင့်“ နာရီအသုံးပြုမှုနာရီ” သည်“ ရူပါရုံစွဲစွဲလမ်းမှု” (Total CPUI-9 ရမှတ်များ) နှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုထားသည် အဲဒါပါပဲ မမှန်ပါဘူး ကနေယူဆက်စပ်မှုအဖြစ် Grubbs ၏ "လွန်ကျူးခြင်း" လေ့လာမှု ထုတ်ဖေါ်:
တကယ်တော့, porn အသုံးပြုမှုနာရီဖြစ်ပါသည် အားကောင်း ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုထက်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု (Total CPUI-9) ကိုခန့်မှန်းသူ။ CPUI-9 ၏“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” လေ့လာမှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ခေါင်းစဉ်အများစုသည်ဤတစ်ခုတည်းအတွက်သာဖြစ်သည်။
ဘာသာရေးနှင့် Total CPUI-9 ရမှတ်များအကြားဆက်နွယ်မှုရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာမေးခွန်း ၃ ခုကအဓိကအားဖြင့်ထုတ်ဝေသည်။ ဒီဒေတာ Grubbs ၏ "လွန်ကျူးခြင်း" လေ့လာမှု # ၂)“ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခ” (၃) ခုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနာရီအသုံးပြုမှုနှင့် Total CPUI-3 ရမှတ်များအကြားဆက်စပ်မှုကိုသိသိသာသာနိမ့်ကျစေကြောင်းဖော်ပြသည်
သငျသညျအမှန်တကယ် porn စွဲကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ (မေးခွန်းများကို 1-6 အားဖြင့်အကဲဖြတ်ကဲ့သို့) porn အသုံးပြုမှုအဆင့်ဆင့်မှအားကောင်းဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မှားယွင်းစွာစုစုပေါင်း CPUI-9 အသုံးပြု. မှဦးဆောင် #2 ဆိုကြသည်: ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းခြင်းသည်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲစွဲလမ်းမှု” နှင့်အလွန်ဆက်စပ်နေသည်။ ဒီဆက်စပ်မှုကို "အဖြစ်ပြန်အနက်ဘာသာရေးကလူမဟုတ်မမှန်သူတို့ porn စွဲဖြစ်ကြသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်အမှန်တကယ်တွင် porn အသုံးပြုမှုအဆင့်နှင့်အလွန်ဆက်စပ်နေသဖြင့် Nether သည်မှန်ကန်သည် မဟုတ် ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ဆက်စပ်သော။ နှိုငျးယှဉျ ဆက်စပ်မှု CPUI-9 ၏အဓိကစွဲလမ်းသည့်အပြုအမူများ (Access Accessss) နှင့်ဘာသာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းသောအချိန်ကာလအကြားဘာသာတရားသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်းပြသသည် -
အထက်ပါဆက်စပ်မှုဒီတစ်ခုလုံးကိုဆောင်းပါးထဲကနေပယ်ရှားတော်မူအရေးကြီးဆုံးသည်: ဘာသာတရားသည်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ တတိယအချက်အနေဖြင့် Access Accessss (မေးခွန်း ၄-၆) သည်အဓိကစွဲလမ်းသည့်အပြုအမူများကို (ဆိုးရွားသည့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကြားမှထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း) ကိုအကဲဖြတ်သည်။ ဒီအပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများအ CPUI-9 အမှန်တကယ်စွဲမေးခွန်းများကို 1-6 အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်းစခွေငျးငှါအဘယ်ကြောင့်လေးဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများသည်။
ဘာသာရေးဘာသာရပ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းသည်ဟုခံစားရပါကဘာသာတရားသည်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသင့်သည်။ မထားဘူး နောက်တစ်နည်းပြောရလျှင်စွဲလမ်းမှုအများဆုံးသောသူများသည်ထိုသို့ပြုကြသည် မဟုတ် ယာနျဘာသာတရားကိုအဆင့်မြင့်ဂိုးသွင်း။
သီအိုရီသက်ရောက်မှု #3: အမှန်တကယ် compulsivity (မအောင်မြင်သော abstinence ကြိုးပမ်းမှု x abstinence အားထုတ်မှု) နှင့်“ ရူပ compulsivity” ဟုခေါ်သည်။
ဖာနန်ဒက်ဇ et al။ , 2017 porn စွဲမှသိသာသောအရာကိုအထဲကထောက်ပြ: ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့တကယ်ခက်ခဲကြိုးစားနေသော်လည်း, အစဉ်မပြတ်ပျက်ကွက်, သင့်မလှူ၏အတိမ်အနက်ကိုဖော်ပြသည်။
တတိယ, ဒီလေ့လာမှု compulsive ၏သဘောထားအမြင်ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့စပ်လျဉ်းအရေးပါသော variable ကိုအဖြစ် abstinence အားထုတ်မှုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဒါဟာစာပေအတွက် IP ကိုအသုံးပြုအကြိမ်ရေ abstinence အားထုတ်မှု၏အကောင့်သင်တန်းသားများကို '' ကွဲပြားအဆင့်ဆင့်သို့ယူပြီးမရှိဘဲစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုရဲ့တွေ့ရှိချက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကြောင်း abstinence အားထုတ်မှုကိုသရုပ်ပြနှင့်ပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်အခါ, သာ. ကြီးရိပ်မိ compulsive ခန့်မှန်း။ အခက်အခဲကြုံတွေ့မိမိတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက် compulsive ရှိစေခြင်းငှါ, တစ်ဦးချင်းစီမှထုတ်ဖေါ်စေခြင်းငှါငါတို့သည်ကိုယ်ပိုင်အပေါ် abstinence အားထုတ်မှု သာ. ကြီးရိပ်မိ compulsive ကြိုတင်ခန့်မှန်းပုံကိုတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်အဖြစ်ရှောင်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းဘို့စွဲလမ်းမှာအခက်အခဲများ၏အတွေ့အကြုံကိုဆွေးနွေး ။ သို့သော်လက်ရှိမှာ abstinence အားထုတ်မှုရိပ်မိ compulsive ဆက်စပ်ပေးသောအားဖြင့်အတိအကျယန္တရားမသေချာမရေရာဖြစ်နေဆဲ, နောက်ထပ်သုတေသနတစ်ခု Avenue ဖြစ်ပါတယ်။
SUMMARY: CPUI-9“ Perceived Compulsivity” အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များသည်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အထူးဆက်စပ်နေသည် အမှန်တကယ် compulsivity (ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ပိုမိုကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုအပ်သော်လည်း၎င်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ခြင်း) ။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် "ရူပဗေဒရူပဗေဒ" ဟုခေါ်သည့်အရာသည်တူညီသည် အမှန်တကယ် compulsive ။
အဓိကအချက် - သင်ကလိင်အရစွဲလမ်းသည်ဟုစွဲလမ်းနေသည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါက (သင်က၎င်းကိုအတင်းအကျပ်အသုံးပြုနေခြင်းကြောင့်) သင်သည်စွဲလမ်းနေသည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများအားလုံးသည် CPUI-9 ရမှတ်များအတွက် proxy အဖြစ်“ ရိပ်မိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှု” သို့မဟုတ်“ ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုအပေါ်ယုံကြည်မှု” စသည့်တိကျသောစကားစုများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်သင့်သည်။
တိကျမှန်ကန်မှုရှိသည့်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လှည့်ဖျားနေသောဝေါဟာရများကို“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” လေ့လာမှုများမှဖယ်ရှားလိုက်သည်။ စာဖတ်သူသည်တွေ့ရှိချက်များကိုတိကျစွာနားလည်နိုင်သည်။
Leonhardt et al ။, 2017 ကပြောပါတယ်:
ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများသည်မိမိတို့၏အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ စိတ် ၀ င်စားမှု၊
Leonhardt et al ။ , တိကျမှန်ကန်ဝေါဟာရများနှင့်အတူ 2017:
ညစ်ညမ်းစွဲသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပူပန်ခံစားရတယ်။
Grubbs et al ။ , 2015 ကပြောသည်:
Grubbs et al ။ , 2015 တိကျမှန်ကန်ဝေါဟာရများနှင့်အတူ:
ဖာနန်ဒက်ဇ et al။ , 2017 သူတို့ညစ်ညမ်းစွဲနေကြသည်ဟုပြောသည့်အခါ Clinician လူနာယုံကြည်နိုင်သောအကြံပြုထားသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲခံနေရသတင်းပို့တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ၏ကုသမှုများအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုသည်။ ညစ်ညမ်းစွဲခံနေရသတင်းပို့တစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးတိုးပွားလာရှိခဲ့ဘူးသောအကြံပြုဖို့စာပေများတွင်သက်သေအထောက်အထားရှိခဲ့သည် (Cavaglion, 2008, 2009; Kalman, 2008; Mitchell, Becker-Blease, & Finkelhor, 2005; Mitchell & Wells, 2007) ။ ညစ်ညမ်းစွဲခံနေရသတင်းပို့တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူအလုပ်လုပ် Clinician အလေးအနက်ထားသည်ဤ Self-သဘောထားအမြင်ယူရန်လိုအပ်ပါတယ်အစားဤ Self-သဘောထားအမြင်၏တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် ပတ်သက်. သံသယဖြစ်ခြင်း. ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်တစ်ဦးချင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် IP ကိုအသုံးပြု compulsive ရိပ် မိ. လျှင်, ဤအမြင်များကိုအဖြစ်မှန်၏အမှန်ပင်ရောင်ပြန်ဖြစ်အံ့သောငှါဖွယ်ရှိကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ထိုနညျးတူ, Clinician သည့်အမြင်အဖြစ်မှန်၏ရောင်ပြန်ပါလျှင် "ရိပ်မိ compulsive" ရှိသည်ဖို့တစ်အသုံးဝင်သောအမြင်အဖြစ်ရှုမြင်ခံရနိုင်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ IP ကိုအသုံးပြု compulsive တွေ့ကြုံခံစားတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီကိုသူတို့ compulsive ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့အပြုအမူကိုပြောင်းလဲဆီသို့ခြေလှမ်းများယူရန်လိုအပ်ပါတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ပေးဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူသို့ဤထိုးထွင်းသိမြင်အသုံးပွုနိုငျကွောငျးကို Self-အသိပညာရရှိမှုမှအကျိုးပေလိမ့်မည်။ သူတို့ရဲ့ IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်မရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. မသေချာနေသောလူတစ်ဦးချင်းစီပန်းတိုင် (က 14 ရက်ကြာကာလအတွက်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်) အဖြစ် abstinence နှင့်အတူ, ထိုကဲ့သို့သောဒီလေ့လာမှုမှာအလုပ်ဟာတစ်ဦးအဖြစ်တစ်ဦးအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုမှသူတို့ကိုယ်သူတို့လက်အောက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့သောအပြုအမူစမ်းသပ်ချက်သဘောထားအမြင်အတွေ့အကြုံသင်ယူမှုမှတဆင့်, အဖြစ်မှန်အတွက် grounded ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်တစ်ဦးအသုံးဝင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။
SUMMARY: ဒါခေါ် "ရိပ်မိ compulsivity" အတွက်အမှန်တကယ် compulsivity နှင့်ညီမျှကတည်းက ဖာနန်ဒက်ဇ et al။ , 2017, porn စွဲခံရဖို့တောင်းဆိုတဲ့သူလူနာတကယ်တော့ porn စွဲခံရဖို့များပါတယ်။ အမှန်တကယ်စွဲ၏ရှေ့မှောက်တွင်အကြောင်းကိုမဆိုသံသယရှိလျှင်, Clinician client ကိုအချိန်တခုတိုးချဲ့ကာလအဘို့အညစ်ညမ်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစားသင့်သည်။
အဓိကအချက် -“ ရိပ်မိသောစွဲလမ်းမှု” မရှိပါ။ ၎င်းကိုသိပ္ပံနည်းကျအသိုင်းအ ၀ ိုင်းတွင်အသုံးမပြုသင့်ပါ။ CPUI-9 ရမှတ်မည်သို့ပင်ရှိပါစေလူနာများကိုယုံကြည်ရမည်။ ထိုကဲ့သို့သော AASECT အဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများ တရားဝင်ကွှေးကျွောထားပါတယ် ညစ်ညမ်းဆေးစွဲတာမဟုတ်တာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ် လူနာအန္တရာယ် နှင့် အများပြည်သူ.
မှ ဖာနန်ဒက်ဇ et al။ , 2017 ဆွေးနွေးမှု:
အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက် compulsive ၏သိမြင်မှု Self-အကဲဖြတ်တစ်ဦးချင်းစီကငျြ့တရားညစ်ညမ်းမနှစ်သက်လျှင်ပင်တိကျမှုဖြစ်လာဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု. Clinician ကိုယ်ကျင့်တရားကိုသူတို့ moralistic ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အလွန်အမင်းရောဂါဗေဒအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူအဖြစ်ညစ်ညမ်းသဘောမတူတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ၏သိမြင်မှု Self-အကဲဖြတ်ပယ်ချဖို့လည်းအမြန်မဖွစျသငျ့သညျ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Clinician, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ client များသဖြင့်ကြုံတွေ့ဆိုတာကိုသတိရဖို့ကိုယ်ကျင့်တရားညစ်ညမ်းသဘောမတူတဲ့သူအထူးသဖြင့်သူမြားကိုလိုအပ်ပါတယ်, compulsive ၏သိမြင်မှု Self-အကဲဖြတ်ထံမှသီးခြားဖြစ်ပေါ်လာသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲအနည်းဆုံးက CPUI-9 ဖြင့်တိုင်းတာသည်လမ်းအတွက်သေချာပေါက် compulsive IP ကိုအသုံးပြုမှု၏ရလဒ်မရှိ, သီးခြားပြဿနာအဖြစ်ကုသခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်.
ပြောင်းပြန် Clinician လည်းတစ်ဦးချင်းသေချာပေါက်ထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏ IP ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်အရှက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုခံစားခြင်းမရှိဘဲသူတို့၏ IP ကိုအသုံးပြုမှုအတွက်အမှန်တကယ် compulsive ကြုံနေရနိုင်ကိုသတိထားပါရန်လိုအပ်သည်။
SUMMARY: ပထမ ဦး စွာ Clinician သည်ဆန့်ကျင်ဘက်အားခိုင်လုံသောအထောက်အထားမရှိခြင်းကြောင့်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုစွဲလမ်းသည်ဟုခံစားရသည့်အခါ (ဘာသာရေး) လူနာများကိုယ်တိုင်၏အကဲဖြတ်ခြင်းကိုလေးစားသင့်သည်။ ဆရာ ၀ န်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အကဲဖြတ်ချက်များအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသို့မဟုတ်လူနာ၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအမြင်များကိုခွင့်မပြုသင့်ပါ။ ဒုတိယအချက်မှာ CPUI-9 အပြစ်ရှိမှုနှင့်အရှက်ကွဲခြင်းမေးခွန်းသုံးခုမှစစ်ဆေးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြemotionalနာသည်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ CPUI-9 လေ့လာချက်များအရအမှန်တကယ်သို့မဟုတ်ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုအပြစ်ရှိခြင်းနှင့်အရှက်ကွဲခြင်းတို့နှင့်ရောထွေးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဆရာ ၀ န်များကတိုက်တွန်းထားသည်။
အဓိကအချက် - ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုသည်အမှန်တကယ်သို့မဟုတ်ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ အကျင့်ယိုယွင်းမှုသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအဓိကထားသည်ဟု CPUI-9 ၏အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းမှုနှင့်အပြစ်ရှိသည်ဟူသောမေးခွန်းများ (စွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်) မှပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ဆရာဝန်များသည်အမှန်တကယ်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသောအခါဆရာ ၀ န်များကသူတို့၏ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောအခက်အခဲများသည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမထောက်ခံမှု၊
အပိုင်း 4: နောက်ဆုံးထင်မြင်ချက်များ
ဒါဟာ CPUI-9 ကဲ့သို့သောချို့ယွင်းချက်တူရိယာအဓိကထိုသို့သောတစ် sexology လယ်ပြင်၌ရှိသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအနေအထားနှင့်ဆက်စပ်ဆောင်းပါးများမှခြီးမွှောကျခဲ့သည်ကိုဘယ်လိုဆင်ခြင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ အဖြစ် ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။ ရှိုးများ, သုတေသန၏ CPUI-9 ခန္ဓာကိုယ်အစိုင်အခဲသိပ္ပံမဟုတ်ပါဘူး။ မဟုတ်သလိုအစဉ်အဆက်စွဲ "ကိုရိပ်မိ" မှအစစ်အမှန်ခွဲခြားနိုင်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်အတည်ပြုသည့် CPUI-9 ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး CPUI-9 တွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတောင်းဆိုမှုများ (အဘယ်သူ၏စေတယ်, ဤတောင်းဆိုမှုများကိုထောကျပံ့ဖို့ပေါ်လာ) အချို့သောစက်ဝိုင်းထဲမှာမမှားယှငျးနိုငျ, သြဇာအမှန်တရားတွေအဖြစ်ပြဌာန်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကိုတကယ်သွားသလဲ? အဖြစ် ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။ ထောက်ပြခြင်း, CPUI-9 ဘာသာရေးကလူအကြောင်းကိုတောင်းဆိုမှုများထုတ်လုပ်ရည်ရွယ်ခံရဖို့ပေါ်လာတဲ့ - အထူးသ, ဘာသာရေးဘာသာရပ်များမှလေးစားမှုနှင့်အတူ "ရိပ်မိစွဲ" ရလဒ်များကိုယိုယွင်းနေနှင့်အထိကောက်ချက်ဆွဲရည်ရွယ်။ အဆိုပါ CPUI-9 အလုပ်သမားအဆိုပါအဖွဲ့များသည်ဤရလဒ်ရည်ရွယ်ဖြစ်စေမ, သည် "ရိပ်မိစွဲ" တောင်းဆိုမှုများသည်အလွန်ထိရောက်စွာဒီအဆုံးအောင်မြင်ခဲ့ကြ, ထိုသို့သူတို့အားထိုကဲ့သို့ရလဒ်အတွက်မွေ့လျော်သောသူအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလူသိရှင်ကြား၏ကောက်ချက်နှစ်သက်ဖွယ်နှင့်ထိုက်တန်ရှာတွေ့.
အဆိုပါ CPUI-9 ၏ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူဟောင်းဘာသာရေးဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သူကသူ့သုတေသနလုပ်ငန်းအားဖွငျ့ disrepute သို့မိမိကဲ့သို့အတင်းကျပ်သောဘာသာရေးပြုစုပျိုးထောင်ရောက်စေဖို့, သတိရှိရှိသို့မဟုတ်မသိစိတ်ထွက်သတ်မှတ်ထားတော်မူကြောင်းကိုကူးမဟုတ်ပါဘူး။ ကျယ်ပြန့်သူ့ကိုကိုးကားပြီးတချို့ကခေတ်ရေစီးကြောင်းအကောင့်, သူ့ရဲ့ "ရိပ်မိစွဲ" တွေ့ရှိချက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုပင်ထပ်မံပြီ မည်သည့် porn အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှု porn စွဲနေတဲ့ယုံကြည်ချက်မှ (သို့မဟုတ်ပင်ထုတ်ပေး) စေတယ်။ ဤသည်ကလက်ခံအခိုင်အမာပြင်းထန်ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုကျယ်ပြန့်ခံစားနေရပြီးနှင့်ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကြိုးစားနေကြသူ porn အသုံးပြုသူများသည် (ဘာသာရေးသို့မဟုတ် nonreligious ရှိမရှိ) ကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသော disservice ပါဘူး။ ဒီနေ့ရဲ့ nonreligious သုံးစွဲသူအတော်များများကမပါဘဲသူတို့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏ဒုက္ခဆင်းရဲကနေ, သူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသမျှမရှက်ရှိသည်။
ဝမ်းနည်းစရာအနည်းငယ်ဝေဖန်သူများက CPUI-9 လေ့လာမှုတောင်းဆိုမှုများနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူအခြေစိုက်ထားတဲ့အပေါ်ဝုဏ်ဆနျးစစျဖို့ဆန္ဒရှိပုံရသည်။ အဲဒီအစားအများဆုံးစိတ်ပညာရှင်နှင့်စာနယ်ဇင်းသမားများ, ဒီအလွန်အမင်းပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်တူရိယာအပေါ်ရမှတ်တကယ်တော့အတွက်ဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာတန်ဖိုးကိုအခိုင်အမာမှာအရှက်ကွဲခြင်း-based "ရိပ်မိစွဲလမ်း၏သက်သေအထောက်အထားယူ.ရိပ်မိ "နှင့်အမှန်တကယ်စွဲစေတစ်ယောက်တည်းဝေးတရားမျှတ" သို့သျောလညျးကိုတောင်နည်းနည်းလေးရောင်ပြန်ဟပ်မှုအပျေါမှာ, မတစ်ခုတည်းရမှတ် (နှင့် CPUI-9 ကဲ့သို့သောအလှနျပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်မေးခွန်းလွှာအပေါ်ဆက်ဆက်မရမှတ်) ဖြစ်နိုင်သည်ခြားနားထုတ်ဖေါ်နိုင်တယ်ကွောငျးထငျရှားဖြစ်လာ " ကကိုးကားခံရသောအဘို့အတောင်းဆိုမှုများ -reaching ။
ဤဖြစ်စဉ်အားလုံးသည်အဖြစ်အလုပ်ထိုကဲ့သို့သောဆိုလိုတယ် ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။ အရေးကွီး၏။ သူတို့ငြိမ်ဝပ်စွာနေတော်မူသောပေါ်မှတူရိယာများ၏တရားဝင်မှုသည်အခြားပိုမိုယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ရှင်းလင်းချက်အဘို့စမ်းသပ်ရလဒ်များကိုဂရုတစိုက်အကဲဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင် CPUI-9 ဒေတာနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူကဲ့သို့မြင့်မားထုတ်ပြန်ထားတဲ့တောင်းဆိုမှုများတခုခုဖြစ်နေတာကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ မှကျေးဇူးတင်ပါသည် ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။ ကသုတေသနတူရိယာသကဲ့သို့, CPUI-9 ချို့ယွင်းချက်များနှင့်စိတ်မချရဖြစ်ပါသည်, ကြောင်းယခုထင်ရှားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတာဝန်ယူသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ၎င်း၏ဖန်ဆင်းရှင်ကိုယ်တော်တိုင်အဖြစ်မျှသံသယဒီမြင်သည်။